June | 2019 | HimiloNetwork
Sawiro – Geedka Ceelbuur-ku-yaalle.
Himilo June 23, 2019	Leave a comment 1,772 Views
MUQDISHO (HN) — Bilowgii 1920-kii, markii Gumeysiga Talyaanigu uu Saldanaddii Hobyo kala wareegay gacan-ku-heynta Ceelbuur, waxyaalaha laga mahdiyay waxaa ugu weyn dhir-beerista. Geed harac-weyne sida Yaaqa u ballaaran kaas oo bixiya ubax-aan-dhab-u-korin oo leh midab jaalle ah oo marka danbe loogu yeeri doono Ceelbuur-ku-yaalle ayaana kamid ah. Geedka Ceelbuur-ku-yaalluhu, ilaa iyo hadda, sida magacaba ka muuqata, waxaa la dhihi karaa ...
﻿Sawiro – Wixii aan kusoo arkay Ceelbuur.
Himilo June 22, 2019	Leave a comment 904 Views
MUQDISHO (HN) — 14 sanno kaddib waxaan socdaal ugu anba-baxay magaalada qadiimiga ah ee Ceelbuur, bartamaha Gobalka Galgaduud. Habeen sii dhammaanaya oo lagu jiro bil Ramadaan ayaa dhex joogsaday kaddib safar qaatay 18 saacadood oo xiriir oo aan kaga nimid Xamar. Imaanshahaygu wuxuu natiijo ka ahaa hilow iyo buseyl igu sii daba-dheeraaday oo aan u qaaday magaaladii aan kusoo indha-qaaday ...
Himilo June 20, 2019	Leave a comment 638 Views
Buugga dhawaan soo baxay oo la yiraahdo Madaxdii-la-Mahdiyay ayaa sameynaya bandhig cajiib ah oo dhinaca iibka suuqa la xiriira – kahor inta aan ugu danbeyntii loo sameynin Bandhig rasmi ah. Dhiganahan ayaa ifinaya sirta guuleed ee sooyaalka shan madax-weyne kuwaas oo horumarro iyo guulooyin taariikhi ah ka sameeyey dalalkooda. Qoraaga Buugga, Zakariya Xasan Maxamed, oo horay usoo qoray dhowr buug ...
Masaajiddeenna iyo sida ay qeyb uga qaataan Wasaqeynta Degaanka!
Himilo June 11, 2019	Leave a comment 438 Views
WARDHIIGLEY (HN) — Iyada oo dhawaan laga soo jeestay gudashada acmaasha Soonka ee bisha Ramadaan ayaa haddana waxaa jira tallaabooyin muuqda oo samafal ah kuwaas oo laga sameeyey goobaha lagu cibaadeysto iyo kulantiyada kale. Afurka oo ah dhacdada maalinlaha ah oo inta lagu jiro bisha la sameeyo waxaa si weyn loogu haliilay in qofna aan looga tagin kelinimo iyo inuu ...
Himilo June 11, 2019	Leave a comment 204 Views
Accra (HN) — Xildhibaan katirsan Golaha Shacabka Ghana ayaa qaatay diinta Islaamka, isaga oo la baxay Shiikh Osman, sida laga soo xigtay Ghana Web. Xildhibaanka, oo horay loogu yeeri jiray Kennedy Agyapong ayaa sheegay inuu qaatay Islaamka markii uu ogaaday inay tahay diin ka hadasha nabadda iyo jaceylka. Wuxuu ka taariikhooday qisada saaxiibadii uu ku lahaa dalka Pakistan xilli uu ...
Maqaayad Pizza bilaash ah siinaysa Qofkii iska xira Moobilka inta uu la joogo!
Himilo June 11, 2019	Leave a comment 473 Views
MUQDISHO (HN) — Isticmaalka moobillada caaqilka ah waxay noqdeen kuwo si xad-dhaaf ah loogu xirnaado. Si taas loola tacaalo, maqaayado badan ayaa macmiishooda caadeystay isticmaalka moobilka waxay ugu deeqayaan fursad kale – inay in yar ka nastaan ku xirnaanshiyihiisa si ay asxaabta la fadhisa ula sheekeystaan. Maqaayad ku taalla California ayaa qaadaysa tallaab qiimo dhismis ah oo loogu yeeray ‘Ha ...
Himilo June 11, 2019	Leave a comment 233 Views
MUQDISHO (HN) — Sawirada muhaajir Venezuela u dhashay kaas oo lagu silsiladeeyey kursiga maqaayad uu cunno kasoo raadsaday – si aanu ula baxsan lacagta lagu leeyahay – ayaa ku baahday baraha bulshada. Waxayna abuurtay dood la isku maan-dhaafay. Sawiradan waxaa markii hore bartiisa soo dhigay weriye u dhashay dalka Venezuela kaas oo wax u qora La Patilla. Si kastaba, walow ...
Masjidkii ugu horreeyey Athens oo laba Qarni kaddib furmaya.
Himilo June 11, 2019	Leave a comment 262 Views
MUQDISHO (HN) — 180 sanno kaddib, Masjidkii ugu horreeyey oo laga dhiso caasimadda Athens ee Giriiga ayaa dhawaan la daah-furi doonaa, sida laga soo xigtay al-Jazeera. Wasiirka Wax-barashada Kostas ayaa sheegay in bisha September wixii ka danbeeya si rasmi ah loogu tukan doono gudaha Masjidka. Mashruuca lagu dhisay Masjidka waxaa lagu bixiyay adduun dhan 850,000 oo lacag Euro ah. Saddex ...
Himilo June 11, 2019	Leave a comment 188 Views
TORONTO (HN) — Canada ayaa marka la gaaro sannadka 2021-ka, waxay mamnuuc ka dhigi doontaa isticmaalka bacda balaatiskada si loo dhimo halista ku foolan noolaha ku jira badaha, RW Justin ayaa ku dhawaaqay. Sharcigan waxaa lala mid dhigay mid sannadkii hore kasoo baxay Midowga Yurub iyo dalal kale. Canada waxay sidoo kale dejin doontaa xeerar la xiriira isticmaalka bacaha oo ...
Qoys Bisha Ramadaan Afur u sameeya Bulshada kala Diimaha ah.
Himilo June 11, 2019	Leave a comment 198 Views
MUQDISHO (HN) — Si joogto maalin walba taniyo bishii Ramadaan sannadkii 2013-ka, qoyska reer Dabbours ee Philadelphia waxay cunno afur bilaash ah u sameeyaan qof kasta oo Amerikan ah oo soo booqda, sida laga soo xigtay WHYY. “Waxaynu wax ka bilownay meel cidlo ah; hadda wax walba waxay ku jiraan sare kac,” ayuu yiri Amer Dabbour oo isaga iyo afadiisa ...
La kulan – Samafalaha Noloshiisa u hibeeyey U-gargaaridda Dadka Darbi-jiifta ah!